Indlu Pucnk-intle emaphandleni
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguUros
Ekupheleni kwedolophana, encotsheni yenduli, phakathi kwendalo, iintaka kunye nemibono emangalisayo, emangalisayo yentlambo kunye neenduli ezijikelezayo zilala indlu yePucnk. Unokonwabela kwaye uzolile kwigadi ebanzi kunye neeterraces ezimbini. Ukuba ujonge umoya omtsha kunye nendalo emini kunye nokuzola kunye nesibhakabhaka esinzulu ebusuku, le yindawo yakho! Kwaye ubunewunewu bendlu entle enefenitshala ye-rustically imini yonke! :) Unemigangatho emibini ye-90sqm kunye negadi ye-800sqm, konke kuwe!
Ukunyuka intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukuhamba iinduli Ratitovec, Jelovica; ukuqubha echibini e-Železniki, echibini iBled, (kuphela i-40min yokuqhuba) okanye echibini laseBohinj (iyure yokuhamba). Ezantsi nje kwenduli, kukho ipaki yezemidlalo iRovn enemisebenzi emininzi kunye nokutya okulungileyo. Iindawo ezininzi ezineendawo zokutyela ezilungileyo kwiidolophu ezikufutshane.
Ilali ifumaneka 10min drive ukusuka edolophini kufutshane Železniki, 20min drive ukusuka kwidolophu entle medieval Škofja Loka. Kukho i-30km kwisikhululo seenqwelomoya esikufutshane kunye ne-40km ukuya eLjubljana. Iindawo ezimbalwa zokuchithela i-ski zikufuphi, i-Stari vrh, i-Soriška planina kunye ne-Črni vrh. Ungafumana ivenkile yokutya kunye nevenkile yokubhaka kwilali esezantsi kwenduli.
Indlu yethu enomtsalane, ephangaleleyo inokwamkela ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezisi-8. Sinikezela ngamagumbi okulala ama-4 amakhulu, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nomatshini wokuhlamba izitya kunye ne-microwave, igumbi lokuhlala elikhulu, amagumbi okuhlambela ayi-2, indawo yokupaka yasimahla yeemoto ezimbalwa, i-oveni eyenziwe ngamaplanga, i-intanethi yasimahla, iTV, iNetflix, iXbox. Kukho indawo eninzi yabantwana yokudlala okanye i-bbq kunye nokuzonwabisa egadini ngaphandle kwendlu.
Sikwanayo neyethu imyuziyam encinci yezixhobo zakudala, izinto zakudala, izixhobo zasefama...
Ifama engummelwane ivelisa kwaye ithengisa ubisi, ibhotolo, itshizi, i-cottage cheese, ijusi yeziqhamo, kunye neschnapps.
5.0 ·Izimvo eziyi-78
5.0 · Izimvo eziyi-78
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi78
Umbuki zindwendwe ngu- Uros
Siza kudibana nawe ekufikeni kwakho kwaye sikubonise ngeenxa zonke. Ungaqhagamshelana nathi nanini na ngexesha lokuhlala kwakho ukuba kuyimfuneko.